Akhriso: Maxay Kawada Hadleen Safiirka Midowga Yurub iyo Ra’iisalwasaare Kheyre? – Goobjoog News
Safiirka Midowka Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Berlanga ayaa maanta magalaada Muqdisho kulan kula yeeshay ra’iisalwasaaraha xukuumadda federalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Ra’isulwasaare kheyre iyo safiirka ayaa ka wada hadlay sidii ay u qabsoomi laheyd doorashada Baarlamaanka iyo madaxweynaha oo la filaayo in dalka ay ka dhacaan sanadka 2021-ka.
Sidoo kale waxaa siweyn ay u falanqeeyeen arrimaha amniga dalka iyo sidii midowga Yurub ay u xoojin lahaayeen kaalinta ay qaataan amniga Soomaaliya. iyo dhameystirka hannaanka deyn cafinta dalka oo meel wanaagsan gaaray.
Kulanka safiirka uu la qaatay wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa uu ku soo aadayaa, iyadoo dhowaan Xasan Cali Kheyre uu sheegay in laga shaqeynayo sidii ay qabsoomi lahaayeen doorashooyinka qaranka.